कोही थाप्दै आउँछन् भने म किन चुप लागेर बस्थें – भाग १ - Wonder Ideas
कोही थाप्दै आउँछन् भने म किन चुप लागेर बस्थें – भाग १
भर्खरै विकेशसँग खाजा खाएर निस्केको हुनाले मैले खाजा खान्न भनें । साढे तिन बज्दै थियो, हजुरभाउजु ले बहिनीलाई काखीमा च्यापेर आईपुग्नुभयो, त्यही मौकामा सानी भाउजु ले मलाई जिस्क्याउँदै भन्नुभयो “अनि महेन्द्र ! तैले त आफ्नो जायजेथा राम्रोसँग हेर्दा पनि हेरिनस् त ? फेरी आउने कहिले हो कहिले ? आएको बेलामा सबै राम्ररी हेरेर जाँदा हुन्छ नि
? दिदी देखाउनुहुन्न छोरोलाई सम्पत्ति ?” “लौ हिँड त जाँउ ! छ बजेसम्म त हेरेर सकिहालिन्छ नि ?” त्यसपछी भाउजु र म आफ्नो जग्गा-जमिन हेर्न भनेर लाग्यौं, अलिकति त आगाडी पनि हेरेका थियौं । सानीभाउजु को करेसापट्टीबाट अघि लाग्ने क्रममा मैले भाउजु लाई च्याप्प समातें अनि किस गर्न थालें, भाउजु ले प्रतिरोध गर्दै भन्नुभयो “छोड् जाँठा ! ठाँउ न कुठाँउ समाउछ… कसैले देख्यो भने फसाद हुन्छ ?” मैले भाउजु को पोकालाई जोडले समाउँदै भनें “तपाईंलाई विश्वास लाग्दैन आफ्नो छोरामाथी !” अनि भाउजु को टि-शर्ट माथी सारेर ब्राको हुक खोलेर बाहिर निकालें त्यसपछी भाउजु को लुङ्गीलाई माथी सारेर पेन्टी पनि खोलिदिएँ र भाउजु को ब्रा र पेन्टीलाई आफ्नो पेन्टको गोजीमा राख्दै भनें “हजुर त मेरो भाउजु मात्रै हो र ! गर्लफ्रेण्ड पनि त हो नि !
अब हिँडदाखेर चाक मट्काउँदै पोका हल्लाउँदै हिँड्नुस् न ?” भाउजु अगाडी अगाडी चाक हल्लाउँदै हिँड्नुभयो, पोका हल्लियो कि हल्लिएन मैले देखिन तर निश्चयनै हल्लिएको हुनुपर्छ । भाउजु अगाडी अगाडी चाक हल्लाउँदै हिँड्नुभयो, पोका हल्लियो कि हल्लिएन मैले देखिन तर निश्चयनै हल्लिएको हुनुपर्छ । म भाउजु को पछाडी पछाडी लाँडो सन्काउँदै हिँडदै रहें । निकै पर उत्तिसको रुखहरु भएको ठाँउ देखाउँदै भाउजु ले भन्नुभयो “उ त्यो उत्तिसको जङ्गल देखिस् त्यहाँ हाम्रो अदुवा खेती छ र त्यही नेर अलैंची पनि रोपेको छ, बारीको डिलजति सबै अम्रिसो लगाको छ ?” म भाउजु को शरिरमा पछाडीबाट टाँसिएर दुवै हातलाई भाउजु को छातिमा बेरेर पोका समाएर हल्कासँग मसल्दै भनें “त्यही गएर हेरुँ न भाउजु !” यसपटक भाउजु ले मेरो हात समाएर डोहोर्*याउँदै लिएर जानुभयो । भाउजु ले अघि देखाएको ठाउँमा पुगेर रोकिदैं मैले फेरी भाउजु
लाई च्याप्प समाएर टि-शर्टभित्र हात छिराएर भाउजु को कोमल र नरम पोका खेलाउन सुरु गरें, भाउजु ले सहमतिमुलक प्रतिरोध गर्नुभयो, मैले भाउजु को पोकामा मसल्दै घुण्डीलाई दुई औंलाको चेपमा राखेर घुमाउँदै भनें “मेरो सम्पत्ति त हजुर हो नि ? हजुर भएपछी मलाई केहिपनि चाहिँदैन ?” “बुहारी पाएपछी थोत्रो भनेर फर्केर नि हेर्दैन होलास् अहिले नाटक गर्छ ?” मैले भाउजु को लुङ्गीको गाँठो खोलिदिदै भनें “त्यो त तपाईको भ्रम मात्र हो भाउजु ! तर एउटा कुरा मान्नुभयो भने चाँही तपाईंलाई म सधैं पियारी बनाएर चिकिरहनेछु ! र मेरो कुरा मान्नुभयो भने सायद: बुबाले पनि तपाईंलाई फेरी धित मर्नेगरि चिकिरहनु हुनेछ ?” “के कुरा भन् न ?” मैले भाउजु को तिघ्रामा हातले समाएर खुट्टालाई मेरो कमरमा बेर्दै हातले भाउजु को पुठ्ठामा च्याप्प समाएँ अनि भनें “तपाईंलाई बुबाको गर्लफ्रेण्डको बारेमा थाहा छ ?” “के भन्छ यो ? तेरो बाउलाई दिनभरी पसलमा बस्न र साँझ परेपछी रौसी खान बाहेक के नै आउँछ र ?”
“यहींनेर त तपाईं चुक्नुभयो नि ? एउटा कुरा भन्नु त मलाई ?” “के कुरा हो भन् न त ?” “बुबा र तपाईं राती सुत्दा बुबाले केहि कुरा नौलो गर्न खोज्नुभएन ?” “छ्या तेरो बाउले जहिले पनि चाकमा चिक्नलाई जिद्धी गरेर बस्थें । चाकमा पनि कहिं चिक्छन् त ?” “ल भन्नु त चाकमा चिक्न दिदाँ तपाईंको के जान्छ ? दुनियाले चिकाउँछन् त चाकमा !” “ओंठ निचोरे दुध आउँछ कुरो चाँही दुनियाको गर्छ ! कसले चिकायो चाकमा लौ भन् त ?” “ह्या भाउजु पनि ! बुबाको गर्लफ्रेण्ड होस् या उसकी बहिनी, सानीभाउजु होस् या विकेशको भाउजु सबैले चाकमा चिकाउँछन् अझ अरुको के कुरा गर्नु रुबीनाले त झन्
एकैपटक दुईटा प्वालमा चिकाउने रहर गर्छे !” “के नचाहिने कुरा गर्छ यो ? चिनेजति सबैको नाम लिएर जे पायो त्यही बोल्छ, कहिले चिकाई तेरो सानीभाउजु ले चाकमा ? अनि रुबीनाको कुरा कसरी गर्न सकेको होला ? कि भ्याईस् रुबीनालाई पनि “हेर्नु भाउजु आईमाई भनेकै चिक्नका लागि हो ? हजुर र बुबा नभाको बेलामा मेरो लाँडो निकै ठन्क्याथ्यो रुबीनाले पुती थाप्दै आएपछी मेरो लाँडोले छोड्न मानेन ! बुबाको गर्लफ्रेण्ड त महाको भालू रै’छे, कोही थाप्दै आउँछन् भने म किन चुप लागेर बस्थें र ? अनि हिजै राती त मैले सानीभाउजु लाई चिकेको ! फेरी सानीभाउजु ले सिधै मेरो लाँडो समातेर चाकको प्वालमा लगेर राखिदिनुभयो ! मजा आयो !” भाउजु लाईनमा आइसक्नुभएको थियो, सोध्नुभयो “गाह्रो हुँदैन चाकमा ?” मैले मोबाईलमा एउटा भिडियो खोलेर देखाउँदै भनें “लौ हेर्नुस् ! नभए एकपटक ट्राई गरेर हेर्नु चित्त बुझेन भने अर्को पटक देखि नगर्नुहोला नि त ?” “लौ क्यारुँ त नि ? फेरी तँ पनि बिच्केलास् भन्ने डर ?”
“हजुरले चाकलाई अलि सजिलै खुलाउनुस् केहि हुन्न ?” मैले भाउजु को लुङ्गीलाई अम्रिसो काटेर फिजाँएको ठाउँमा ओछ्याएँ र भाउजु लाई त्यसमाथी पल्टाएँ अनि भाउजु को खुट्टा फारेर पुतीमा ओंठ जोडेर चुस्न सुरु गरें । भाउजु ले नयाँ तरुनीले झैं आफ्नो उत्तेजना झल्काउँदै आँखा बन्द गरेर मेरो टाउकोलाई दुवै हातले समाएर पुतीमाथी गाडेझैं गर्नुभयो, मैले मेरो हातलाई भाउजु को पोका खेलाउनमा मस्त गराएँ भने अर्को हातले मैले आफ्नो पेन्टको जिपर खोल्न थालें । निकैबेर भाउजु को पुती चुसेर छिपछिपे बनाएपछी मैले भाउजु को पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गरें । खुला आकाशमुनि भाउजु र छोराको त्यो चिकाई निकै अनुकरणिय थियो । म भाउजु
को पुतीमा मच्चिदैं गर्दा भाउजु को पोकाहरु मजाले हल्लिएर मलाई स्वागत गरिरहेका थिए । केहिबेर भाउजु को पुतीमा चिकेर मैले लाँडो झिक्दै भनें “भाउजु ! अब हजुर घोडी भएर बस्नुस् म तपाईको चाकको ढोका खोल्छु ।“ भाउजु सरासर उठेर आफूलाई घोडीको आसनमा राख्नुभयो र मैले भाउजु को चाकको दुवै पुठ्ठा समातेर फट्याउँदै चाकको प्वालमा पर्नेगरि थुक खसालें अनि बुढी औंलालाई भाउजु को चाकमा खेलाउन थालें । “मलाई त कस्तो डर लाग्दैछ छोरा केहि भईहाल्यो भने ?” मैले भनें “हजुरकी भर्खरकी तरुनी छोरीले त चाकमा चिकाईसकी डराउनुहुन्छ… ढुक्क हुनुस् केही हुँदैन !”
अनि हातभरी थुक लिएर लाँडोलाई भिजाउँदै मैले लाँडोको टुप्पोलाई भाउजु को चाकको प्वालमा सोझ्याएँ, भाउजु ले चाकको प्वाललाई सहज तरिकाले छोडेकी थिईन् ताकी मलाई सजिलो होस् । भाउजु ले सोध्नुभयो “अनि रुबीनालाई चिक्न तँलाई कस्तो मनले मानेको ?” “के मन चाहियो भाउजु ! तपाईलाई चिक्दा मलाई केही अप्ठेरो लाग्यो र अनि उ त हजुरकै छोरी त हो नि ? यतिखेर बुबासँग गाँड मराउँदै होली !” “हँ के भन्छ यो ? तेरो बाउले पनि चिक्छन् छोरीलाई ?” “अनि के त ? उसलाई त अझ बुबा र मेरो दुवै लाँडो एकैपटक छिराउने रहर पो हुन्छ त ? कति मजाले चिकाउँछे जाँठीले ।“
मलाई सोह्र बर्षे जवानी फर्केर पो आयो – भाग १
मेरो शरीरमा एक किसिमको कम्प पैदा भयो